China Mercedes Benz Mota Vhidhiyo Brochure & Kadhi, LCD Screen Kadhi, A4 Gadzira Kudhinda Kwekusimudzira Mota Kugadzira uye Fekitori | VhidhiyoBhurocha
Mercedes Benz Mota Vhidhiyo Brochure & Kadhi, LCD Screen Kadhi, A4 Gadzira Kudhinda Kwekusimudzira Mota
1. Makadhi ebhurocha reVhidhiyo anogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji kusimudzira bhizinesi. Iyo inokodzera chero indasitiri yakadai seReal Estate, Mushonga, Chipo Chipo. Nezvimwewo…
2.Kuenzaniswa nebhurocha rechinyakare chechigadzirwa, makadhi edu ekukwazisa evhidhiyo anogona kushandiswa kuridza vhidhiyo, mumhanzi uye mifananidzo.
3. Iwe unogona kuzviita neyako dhizaini. iyo pringting hunyanzvi uye vhidhiyo zvakasanganiswa mubhurocha redu revhidhiyo semhedzisiro. Inoita fungidziro yekusingaperi pane ako tarisiro vatengi.
1. Makadhi ekukwazisa evhidhiyo anogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji kusimudzira bhizinesi. Iyo inokodzera chero indasitiri yakadai seReal Estate, Mushonga, Chipo Chipo. Nezvimwewo…
1. Isu tinoita akasiyana maswiti emakadhi ekukwazisa evhidhiyo:
Magnetic switch: paunovhura chigadzirwa, Inogona kutamba vhidhiyo yacho zvoga; Ukachivhara, chakamira kushanda
On / off bhatani switch: iwe unogona kuwedzera pa / bhatani bhatani, kana iwe ukaripurudzira, rinotanga kushanda; paunodzvanya agaign, Yakamira kushanda
Motion switch switch: Inotanga kushanda kana iwe uchipfuura pamberi peinofamba sensor, Yakamira kushanda kana iwe uchienda.
2. Makadhi ekukwazisa evhidhiyo anogona kuwedzerwa akawanda mabhatani ebasa: kutamba / kumbomira, yapfuura, inotevera, vhoriyamu kumusoro, vhoriyamu pasi, kunyarara, kutangazve, vhidhiyo bhatani (tamba vhidhiyo yaunoda), bhatani remufananidzo, Bhatani reMumhanzi nezvimwe ...
3. Unogona kukodha vhidhiyo, mimhanzi uye mafaira emifananidzo chero nguva yaunoda. Unogona kushandisa mavhidhiyo ekukwazisa makadhi seU-Disk. Paunobatanidza bhurocha redu revhidhiyo nekombuta kana adapta, Inogona kuchinjwazve.
4. Paunodzosera makadhi ekukwazisa evhidhiyo, ndapota vhara chigadzirwa pakutanga. Zviri nyore kukanganiswa nemumvura. Kuichengeta kure nemvura.
5.Girazi rekubata rinotsigirwa nemabhurocha mavhidhiyo e4.3, 5 inch, 7 inch uye 10 inch.
6. Yedu yakajairwa chigadzirwa saizi ndeye A4 saizi, A5 saizi, saizi yakagadziriswa inogamuchirwa. Unogona kuzviita nehukuru hwaunoda.
7. Unogona kusarudza saizi saizi, saizi yebhatiri uye saizi yekurangarira sezvaunoda. Bhuku redu revhidhiyo rine mutengo wakakura. Iyo inokodzera kune vese vatengi.
8.Kugadzira kwetsika kwesarudzo yako, senge embossed, inopisa kutsikisa mugoridhe kana mune sirivheri nezvimwe ...
9. Sisitimu yakatsigirwa: WIN7, WIN8, XP, Mac, nezvimwe…
Makatoni akasimba ekutakura akachengeteka-Isu tinoshandisa makatoni akasimba ayo anozochengetedza zvigadzirwa zvakanaka kana uchitakura. Zvakare, kune gobvu parera wool betweencartons uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvigadzirwa.
Pashure: Colgate Nyowani Bhizinesi Kukoka LCD Bhurocha Chipo Dhijitari TFT skrini Vhidhiyo Kukwazisa Kadhi
Zvadaro: Astrazeneca 7inch inotakurika hardcover vhidhiyo bhizinesi bhurocha nebhizinesi kadhi homwe
Astrazeneca 7inch inotakurika hardcover vhidhiyo busi ...
Smart 8 padiki huni Dhijitari Calendar Zuva Clock Id ...
F9 Tws 5.0 Yechokwadi Wireless HIFI Stereo Headset Ea ...
Universal otomatiki Clamping Qi Wireless Car Ch ...